Akụrụngwa | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Otu esi choputa ebe a na-emeputa ihe
Maka ihe ọkụkụ dị na mpaghara azụ, mmiri si na olulu mmiri kacha nso, ogidi, na ebe ndị dị na mmiri na-ejikarị eme ihe, ebe ọ bụ na ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ọ ga-eme ka ọ bụrụ ihe dị mkpa. Ma ọ bụrụ na ụlọ anaghị ejikọta usoro mmiri ozuzo, ọ ga-adị mkpa iji dozie nsogbu nke mmiri na ogige ahụ. Mgbe ahụ, ndị nwe mkpa iji nyochaa ajụjụ banyere otu esi họrọ ebe a na - agbapụta ụlọ maka ụlọ.
Esi eji aka ha mee ngere maka akwa ahụ
Ebe m nwere ọbụna obere ala ala, Achọrọ m ịkụ ihe na ya nke ga-amị mkpụrụ ma ọ bụ dị na-amasị anya. Ma, ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na ndị na-elekọta ubi adịghị eche echiche banyere ihe ndozi nke akwa. Ọ bụ ya mere e ji mee ka ogige maka akwa ahụ bụrụ ihe na-adịghị mma ma lee anya na-adịghị mma.
Ihe niile gbasara ọkụ ọkụ na-agbagharị maka traktọ
Ndị tractors, mini-tractors na tillers enyere aka mee ka ndụ dịkwuo mfe maka ndị ọrụ ugbo niile: site na obere ugbo na ihe ndị dị oke ugbo. Ihe dị mkpa nke traktọ bụ ohere nke iji ngwá ọrụ na-ekpuchi ma tinye ya maka ọrụ dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, maka mowing ma ọ bụ ịkwadebe ubi maka ịgha mkpụrụ na-eji ụdị mowers dị iche iche.
Ịgba akwa plasty decorative maka akwa gị (na foto)
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-etinye ntụziaka zuru oke na saịtị gị, ị nwere ike ịkwalite ma gbakwunye ihe. E kwuwerị, ihe ndozi ahụ kwesịrị ekwesị ọ bụghị naanị na ogige ahụ, kamakwa n'ogige. Enwere ike icho mma osisi, akwa na oghere gburugburu osisi, dịka ọmụmaatụ, site n'enyemaka nke fences. Ihe dị iche iche akwa plastik jikọrọ ọnụ n'ime ụlọ gị ma nyere aka ịhazi osisi ahụ, iji hụ na ha na-eto eto na ọbụna oyi.
Ihe dị mkpa ka ị tụlee iji wuo nkịta nkịta
Na mbụ, nkịta ndị bi na yad, wuru ụlọ ntu ma kegide ha na agbụ. Taa, na-esiwanyewanye na-ewu ụlọ ihe owuwu. N'aka nke aka, nkịta enweghị ike ịnweta ahụ nke ọbịa ahụ na-abanye n'ogige ahụ, n'aka nke ọzọ, olu anaghị agbanye n'olu ya mgbe niile, ndị nche kwesịrị ntụkwasị obi pụkwara ịkwaga n'ogologo ya.
Na-echekwa ngwaahịa na okpuru ulo plastic
Ndị bi n'oge okpomọkụ, bụ ndị na-ahọrọ ịmalite akwụkwọ nri maka ọdịnihu ma mee nchekwa, na-eche nsogbu nke nchekwa nchekwa ogologo oge. Enweghị okpuru ulo ebe a ezughị. Otú ọ dị, ọ bụghị onye ọ bụla nwere oge na ikike ịmepụta ya n'onwe ya, ọ dịkwa gị mkpa inweta enyemaka nke ndị ọkachamara. N'oge na-adịbeghị anya, ụlọ okpukpu ụlọ ndị a na-eme n'oge okpomọkụ na-arịwanye elu.
Kwado ụlọ ezumike gị n'onwe gị
Ọtụtụ mgbe, ndị nwe ala nwe obodo na-eche nsogbu nke oghere na-enweghị atụ: potholes, slopes, olulu, na ihe ndị ọzọ. Ọtụtụ ndị na-eche na ọ ga-ewe ọtụtụ mgbalị na ego iji kwado ọnọdụ ahụ. N'isiokwu a, anyị ga-achọpụta otú ị ga-esi jiri aka ha dozie ibé ala ahụ n'ọhịa ma ọ bụ n'okpuru ogige, ọ ga-esi ike ma ọ bụ dị mfe ime ya.
Nlekọta na nhọrọ nke osisi akuku
N'ụlọ mmadụ ma ọ bụ na mba ahụ, ọtụtụ ndị na-ewu ebe mmiri. N'ezie, na nke a, i nweghị ike ime n'enweghị omenala ndị ga-abụ ihe mara mma nke ụlọ ahụ. N'isiokwu a, anyị ga-akọwa nke osisi ndị na-akpa mmiri na-adabara ọdọ mmiri na mmiri ndị ọzọ, otu esi akụ na ilekọta ha. Ọrụ nke osisi na ọdọ mmiri O doro anya na ọdịbendị na-eto eto na ọdọ mmiri ahụ na-eme ka ọ mara mma, nke mbụ na ndụ.
Ha na-eji aka aka ha eme ihe
Otu n'ime ihe ndị na-emetụta mmalite nke ịgha mkpụrụ, nakwa dị ka mmụba na mmepe nke osisi a kụrụ, bụ okpomọkụ nke ogige ala. Ruo otu oge, atọ ma ọ bụ ọbụna anọ dị elu nke ubi dị iche iche a kụrụ site n'otu mpaghara nwere ike nweta site na akwa akwa, nke nwere ike iji aka aka dozie ya.
Esi eme ka ventilash na okpuru ulo
Ọtụtụ mgbe, anyị na-eche okwu nke nchekwa oyi na akwụkwọ nri na akwụkwọ ndị ọzọ. Ebe dị mma bụ ụlọ okpuru ulo, Otú ọ dị, ka ngwaahịa wee dịrị n'ime ya ruo ogologo oge, ọ dị mkpa iji hụ na ventilash dị irè. N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị otu esi eme mkpuchi na okpuru ulo. Kedu ka o si arụ ọrụ?
Kwa afọ ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ ugbo na-arụ ọrụ azụmahịa ha na-amụba. Inyeaka na nhazi nke oru na ugbo na-eme ka oru a na-aru, na-eme ka umuaka di nma ma mebie ugwo nke ngwaahịa. Ngwa ndị a na-agụnye ndị ntanetị nri.
Gwakọta "Niva" SC-5: nyochaa, njirimara, uru na nkwekọrịta
Ihe kachasị mma nke ụgbọala na-agafe oge na-ejikarị akụkọ ifo ma ghọọ ụdị akara ngosi oge. Otú ọ dị, ọtụtụ n'ime ha na-arụ ọrụ nke ọma ma ka na-emepụta. Otu n'ime "ogologo oge" ndị a na-atụle na nyochaa. Anyị na-amụta ihe dị ịrịba ama banyere ngwaọrụ nke akụkọ ntụrụndụ na-ejikọta "Niva SK-5".
Ụkpụrụ okike nke permaculture
Ọdịdị nke ọtụtụ ihe ubi n'ubi anaghị agbanwe agbanwe kemgbe afọ - ihe ọ bụla dị na ya nwere ebe nke ya, nke ọ na-emekarị ka ọ ghara ịkwaga. Nkà na ụzụ dị otú ahụ na-emepụta mkpụrụ siri ike, ma ọ dịghị echebara eziokwu ahụ bụ na ngwakọta nke ala nwere ike ịgbanwe, na osisi kwesịrị ịdị ọzọ, na-etinye ha na "kwesịrị ekwesị".
Esi mee nsu nke gabions mee ya n'onwe gị
Ruo ugbu a, e nwere ọtụtụ ihe dịgasị iche iche nke a pụrụ iji mee ihe maka owuwu nke akụkụ dịgasị iche iche dika fences. Mgbe ị na-ahọrọ otu ma ọ bụ nke ọzọ, ọtụtụ mgbe, eziokwu ahụ bụ na ọ dị ike ma jee ozi ruo ihe karịrị otu afọ. Otu ihe dị mkpa bụ ihe dị iche iche na ọdịdị nke ngere ahụ.
Otu esi eji aka aka gi eme ihe n'emebe ulo
Ọtụtụ ndị nwere nnukwu anụ ụlọ nke ụmụ anụmanụ na mpaghara ha. N'ọnọdụ ndị dị otú a, enwere nnukwu nsogbu nke nhazi ndepụta - agụụ maka "wards" dị oke mma, a na-akwadebekwa nri ahụ mgbe mgbe. Iji mee nke a, ị ga-achọkwa ngwá ọrụ, ma atụmatụ ụlọ ọrụ mmepụta na-efu ọtụtụ. Ma, ihe ngwọta ka dị - ịchọta ọka wit na aka aka gị.
Ọnọdụ nke ógbè anyị dị otú ahụ nke dị site n'ókèala niile na-ejikwa ọkụ n'oge oge ịgha mkpụrụ nke osisi na-emeghe. A griin haus na-abịa enyemaka nke ndị na-elekọta ubi, ma e nwere ụfọdụ ọnọdụ okpomọkụ chọrọ ọbụna n'ihi na griinụ ala. Iji mee ka usoro nke okpomoku di na ala na griin kporo polycarbonate na iji chekwaa seedlings site na mmeghari onodu uzo di elu, o kwesiri igbadebe ihe ndi na-ekpo ọkụ site n'oge mgbụsị akwụkwọ.
Kedu aka iji aka aka gị mee ihe
O siri ike iche n'echiche nke onwe gị na-elebeghị kebab ọ dịkarịa ala ugboro ole na ole na oge. Otutu mgbe, ugwo maka okike bu ihe mgbagwoju anya site na enweghi isi ihe di iche - bu ihe ngbachapu, nke n'eme ka ndi agha a ghara idi ugbua. Na njedebe, ị na-ekpebi iji aka gị rụọ ọrụ na saịtị gị, ma ị maghị onye ị ga - ahọrọ na ebe ị ga - amalite.
Ọka dị oke mkpa dị ka otu n'ime ihe oriri dị mkpa maka ndị mmadụ na ụmụ anụmanụ, n'ihi nnukwu ihe oriri ya. Mgbe ọ na-eto ya dị ka ihe oriri, ọ dị mkpa iji kewaa mkpụrụ si cobs. Usoro a bu nsogbu. Ya mere, iji mee ka ọ dịkwuo mfe, ị nwere ike iji aka gị mee ọka ọka pụrụ iche.
Ụlọ atụrụ: ị ga-esi mee onwe gị otu atụrụ?
Ndị ọzụzụ atụrụ na-adabere na usoro oyi nke ìgwè ehi. Nzukọ ya kwesịrị ekwesị nwere ọtụtụ atụmatụ. Ụlọ nke ọ bụla ọnọdụ dị mkpa maka ịzụta atụrụ ga-ekewapụ iche na-ewu ya site na-emebu shed. N'isiokwu a, anyị ga-akọwa otú ị ga - esi mee ka atụrụ dị mma - ụlọ dị mma maka anụ ụlọ a.
Kedu otu esi eji aka gị rụọ ụlọ?
Mpaghara ahụ bụ mgbatị na ụlọ ahụ nke na - enye gị ohere ịmasị ọdịdị, ma n'otu oge ahụ nọ na ebe obibi dị jụụ. Enwere ike ime brik ma ọ bụ osisi, anyị na-enyekwa gị nhọrọ kachasị mma na oge kachasị mma - a na-emepụta polycarbonate. Ebe mbụ, ịkwesịrị ịzụlite ihe owuwu, na nke a, ị ga-achọ ịghọta nke ọma ihe mere i ji chọọ ya, ụdị ụdị ozi ị chọrọ, ụdị ụdị ị ga-ahụ site na ya.